व्यङ्ग्य - ओलीका उखानको सप्रसङ्ग व्याख्या | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
व्यङ्ग्य - ओलीका उखानको सप्रसङ्ग व्याख्या
पुस २५, २०७७ शनिबार ९:६:२२ | मिलन तिमिल्सिना
हिजोआज मुसुक्क मुस्कुराउन, पेट मिचिमिची हाँस्न र जिउमा काउकुती लगाउन टेलिभिजनमा हाँस्य-व्यङ्ग्य कार्यक्रम हेर्नै पर्दैन । कार्टुन र हाँस्य-व्यङ्ग्य कार्यक्रमले भन्दा बढ्ता मज्जा नेकपाका नेताहरुका भाषणले दिइरहेको हुन्छ ।
नेकपामा कुन नेताको पो कुरा गर्नु ! वामदेव गौतम आफू कतै छैन भन्छन्, तर दुवै समूहका उनी उपाध्यक्ष हुन् । हाँस्नको लागि वामदेवको भाषण सुन्नै पर्दैन, उनको यही अवस्था मनोरञ्जन लिन काफी छ ।
ओली, प्रचण्ड, नेपाल, खनालका त कुरै नगरौँ । एक-एकको अनुहार, विगत र वर्तमान, अनि भाषण सम्झँदैमा हाँसोको फोहोरा छुट्छ । त्यसमाथि पनि सरकारी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोली सुनेपछि लास बनेर घाटमा पुगेको मान्छे पनि चित्ताबाट जुरुक्क उठेर चित खाँदै हाँस्न बेर मान्दैन ।
ओलीका कुन बोलीको मात्रै बेलिबिस्तार लगाउनु ? २०७५ सालमा औँला ठाडो पार्दै ओलीले बोलेका थिए - ‘दुई वर्षभित्रमा काठमाण्डौलाई स्वच्छ बनाउँछु । त्यसपछि विश्वका मान्छेहरु सास फेर्नका लागि काठमाण्डौ आउँछन् ।’
तर यो हप्ताकाे पहिला दुई दिन ओलीले बोलेको उल्टो भयो । अस्ति दुई दिन काठमाण्डौको मौसम बद्ली के भएको थियो, यहीका बासिन्दाको सास प्रदूषणले झण्डै खुस्काइ दियो । मान्छे बस्न अयोग्य सहरहरुको सूचीमा काठमाण्डौ एक नम्बरमा पर्यो भन्ने कुरा विश्वका मान्छेले थाहा पाए । अहिले पनि अवस्था यस्तो छ कि सफा हावामा मात्रै कति सास फेर्ने, एकपटक काठमाण्डौको प्रदूषणमा पनि सास फेरौँ भनेर पर्यटक यहाँ आउन बेर मान्दैनन् ।
यो त दुई वर्षअघिको ओलीको बोली र त्यसको व्याख्या । त्यतिबेला ओलीले गफ दिएका ग्याँसका पाइप, चुच्चे रेल र पानीजहाजका कुरा एकछिनलाई बिर्सौं । बितेका दुई हप्ता यता ओलीले विरोधी नेतालाई भित्तामा पुर्याउने गरी दुई सय पटक ओकलेका गोलीजस्ता बोलीका केही अंशलाई मात्र सप्रसङ्ग व्याख्या गरी हेरौं ।
प्रचण्ड र माधव नेपालकै कारण एकता गरेको तीन वर्षसम्म पार्टीले गतिहीन भएको निष्कर्ष सुनाउँदै ओलीले भने, ‘दुईवटा नटबोल्ट फेर्दा गाडी अगाडि बढ्यो । हामीले फेरेको पनि होइन, आफैं फुक्लिएको नटबोल्ट । खिया लागेका दुईवटा नटबोल्ट फुक्लिएको थियो, पार्टी गतिसाथ अगाडि गयो ।’
- त्यो त हेर्दै थाहा भयो नि । नटबोल्ट खुस्केपछि ओलीले चलाएको गाडी ओरालो कुदेको कुदेकै छ । कहाँ पुगेर ठोक्किने हो र कुन भीरमा पुगेर फाल हान्ने हो ! तर गाडी बेपत्तासित कुदिरहेको छ ।
पार्टी वैधानिकताको प्रश्नमा प्रचण्ड र नेपाललाई कटाक्ष गर्दै ओलीले पेडा पसलेको संज्ञा दिए । ओलीले भने - ‘निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले पत्र प्राप्त गरेँ । उहाँहरुले निवेदन हाल्नुभएको रहेछ असली हामी हौं भनेर । यो बरमझियाको पेडा पसल हो र असली र नक्कली हुन ?’
- तर यसो भन्दा ओली आफैँले आफैँलाई सबैभन्दा पुरानो असली बुढोको पेडा पसल मेरै हो भन्ने कुरा पनि त सबैले बुझिरहेकै छन् ।
नेकपाको वैधानिकता आफ्नो समूहले पाउने दाबी गर्दै ओलीले आयोग र सर्वोच्च अदालतले चार्ली च्याप्लिन चिन्ने तर्क गरे । ओलीले भने - ‘जसको घर हो, उ निवेदन हाल्न किन जान्छ ? कार्की ब्याङ्क्वेटमा खानपिन गरेर केपी ओलीलाई निकाल्दिऔँ भनेर घोषणा गर्नुभएछ । निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र पठाउनु भएछ केपी ओलीलाई निकाल्यौँ भनेर । त्यो हेरेर निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु कति दिन हाँस्नुभयो मलाई थाहा छैन ।’
- पत्र हेरेर हाँसे कि रोए, त्यो त निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुलाई नै थाहा होला । तर ओलीको यो कुरा सुनेर आयोगका आयुक्तबाहेक दुनियाँका अरु सबै हाँसे । आयुक्तहरु त नेकपाको घरझगडा मिलाउने उपाय फेला नपारेर दिनरात रोइरहेका पो छन् ।
आफ्ना सहयात्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई ओलीले कुहिएको फलसँग दाँजे । ओलीले भने, ‘अब, भेट्नु कुहिएर झरेको दुईटा फलहरुले रुख मै हुँ भनेर दाबी गर्ने ?’
- सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सँगै रहेका फल एउटा कुहियो भने अर्को पनि सद्दे रहँदैन । अस्तिसम्म ओलीसँगै रहेका दुईवटा फलको भेट्नु कुहिएको हो भने आफूलाई भेट्नुको पनि भेट्नु ठान्ने ओलीको हालत झन् के होला ? दुईवटै फलको मूल भेट्नु आफै हो भन्ने ओलीलाई दुनियाँले कसरी सग्लो ठान्दो हो कुन्नि !
ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले गरेको आन्दोलनलाई रत्नपार्कमा औषधि बेच्नेसँग तुलना गर्दै भने, ‘अलिअलि मान्छे त सिसीमा औषधि बेच्नेले पनि रत्नपार्कमा जम्मा गर्छ । उहाँहरुको हालत त्योभन्दा बढ्ता हुनेवाला छैन।
- रत्नपार्कमा औषधि बेच्ने सबैले मान्छे जम्मा पार्न सक्दैनन् भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ । जसले तुक्का हालेर चटके कुरा गर्न सक्छ, बेकामे औषधिलाई बकम्फुसे तुक्का हालेर मान्छे हँसाउन सक्छ, मान्छे उसैकोमा जम्मा हुन्छन् । रत्नपार्कमा औषधि बेच्नेमध्ये यस्तो खुबी माधव नेपाल र प्रचण्डसँगभन्दा त ओलीसँगै बढी छ । त्यसैकारण अहिले माकुने र पुकदा त अहिले पिठो बेच्न पनि नसकिने हो कि भनेर हैरान छन् ।
आफूले नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराएको दाबी गर्दै ओलीले भने, ‘अहिले भारतका हरेक मान्छेलाई नेपालमा प्रधानमन्त्री को छ भनेर सोध्नुभयो भने कण्ठै थाहा छ ।’
- भारतको कुरा छोडौं, चन्द्रमा र मंगलग्रहतिर पनि थाहा भैसक्यो होला नेपालमा प्रधानमन्त्री को छ भनेर । चुनाव अघि रेल र पानीजहाज ल्याउँछु भनेर पाँच वर्षलाई चुनिने, तर न रेल ल्याउन नसकेपछि झेल गरेर तीन वर्षमै चुनाव ल्याउने प्रधानमन्त्रीलाई नचिनेर हुन्छ र ! त्यसमाथि हाँस्यकलाकारलाई समेत उछिनेर सारा मान्छेलाई हँसाउन सक्ने कला भएका प्रधानमन्त्रीलाई नचिनौँ भन्नेलाई पनि चिन्न कर लाग्छ ।
ओलीले एक एक हिसाब केलाएर भने, ‘वैशाख १३ देखि पुस ४ सम्म खुमलटारमा मात्रै पार्टी फुटाउने बैठक २८० बसेका रहेछन् । गनेर मैले रेकर्ड हेरेँ । ३५ बैठक बाहिर बसेका रहेछन्, कहिले कोटेश्वर, कहिले प्रेसिडेन्सियल कलेजमा, कहिले अँगेनाको डीलमा । अनि अर्याल होटेलमा । कहिले कसको घर त कहिले कसको घरमा ।’
- अनि बालुवाटारको चोटा कोठामा बसेको हिसाब चाहिँ कसले गरिदिने नि ? सबैतिरको हिसाब गर्ने हो भने दुवैतिर ठ्याक्कै ४२० पुग्छ भन्छन् जानकारहरु त !
माधव नेपालको आलोचना गर्दै ओलीले भने, ‘दुई ठाउँबाट चुनाव हार्ने, संविधानसभामा आउने । स्प्रिङ बोर्डमा उछिट्टिएजस्तो गर्ने । चुनावमा हारेको मान्छे जम्प गरेर संविधानसभा सदस्य । संविधानसभाको संवैधानिक समितिको सभापति अर्को स्प्रिङ बोर्डमा जम्प गरेको छ । अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट हाइजम्प । जम्प, हाइजम्प, पोलजम्प । चुनाव हारेको मान्छे माथि पुगिराख्या, दुनियाँ छक्क । त्यस्तो लोकतन्त्र खोज्नुहुन्छ उहाँ ।’
- अनि उबेला माधव नेपालले हाइजम्प र पोलजम्प गरेको त पार्टीलाई पनि मज्जै भएको थियो त । अनि दुनियाँ त अहिले पो छक्क पर्दैछन् कस्तो रहेछ नेपालको लोकतन्त्र भनेर । अमेरिकामा ट्रम्पले त यहीँबाट सिकिसके ।
यी त ओलीका केही बोलीका सप्रसङ्ग व्याख्या मात्रै हुन् । ओलीका जिब्रोको व्याख्या गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि सक्दैन भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ । अनि अन्त्यमा ओलीले फुँदा गाँसेर भन्न बाँकी एउटा टुक्का पनि जोडी हालौँ । धेरैले अमेरिकामा ट्रम्पले गरेको उपद्रोलाई ओलीसँग दाँजे ।
अमेरिका र नेपालको लोकतन्त्र उस्तै रहेछ, ओलीको सिको गरे ट्रम्पले भनेका छन् । यस्तो सुनेर ओलीलाई कस्तो भयो होला ? अब उनले भन्नेवाला छन्, ‘ट्रम्पले मेरो सिको गरे भन्ने साथीहरुलाई सम्झाऔँ - ट्रम्प कहिल्यै ओलीजस्तो हुन सक्दैनन् । उनले टुक्का मिलाएर भाषण गर्न जान्दैनन् । बन्दुकको गोलीमा भन्दा ओलीको बोलीमा तागत हुन्छ भन्ने उनलाई थाहै छैन । त्यसैले उनी ओलीजस्तो कहिल्यै हुन सक्दैनन् । उस्तै पर्यो भने ओली चाहिँ ट्रम्पजस्तो हुन सक्छन् ।’
अन्तिम अपडेट: चैत २४, २०७७
वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई 'कोभिड–१९ युनिफाइड' केन्द्रीय अस्पत...
अक्सिजन अभाव भएपछि सीमित बिरामीको मात्रै उपचार गर्ने निर्णयमा...
प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई कांग्र...
बुटवल र ललितपुर एनएसएल फुटबलको प्ले अफमा, विराटनगर र पोखरा...
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको परीक्षण सुरु, पाेलहरु नछुन प्राधिकरणक...
हावाको माध्यमबाट पनि काेराेना सङ्क्रमण हुन सक्छ : सीडीसी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिशोध साँध्ने संस्था बन...
पाँचथरमा फौजी किराले मकै बाली सखाप पारेपछि किसान चिन्तित
मन्त्रिपरिषद् बैठक चल्दै
आठ हजार चार सय १८ सङ्क्रमित थपिए, ५३ जनाको ज्यान गयो
एकै दिन तीन हजार बढी काेराेना सङ्क्रमित निकाे भए
वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरलाई कोराेना विशेष अस्पताल बनाइने
काठमाण्डौ महानगरले दियाे त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई १० भेन्टिलेटर
आफूलाई मानसिक समस्या भएको यसरी थाहा पाउन सकिन्छ
राष्ट्रिय सभा सदस्य उपचुनावका लागि बादल, देवकोटा र तामाङको उम्मेदवारी
भारतमा बिरामी बोकेर उडेको जहाजको पाङ्ग्रा बीचमै खस्यो, मुम्बईमा सकुशल अवतरण
एनसेलले ल्यायो उपभोक्तामैत्री राहत अफर, फाेन सम्पर्कमा रहिरहन सहज हुने
कोरोना सङ्क्रमितले के गर्ने ? के नगर्ने ?
घरमै बालबालिकाको सिकाइ प्रभावकारी बनाउने उपाय
यूएईमा काम जति नि छ, खोज्ने धैर्यता आफूसँग हुनुपर्छ
आधा जीवन भारतमा मजदुरी गर्दै बित्यो, महामारीमा अलपत्र परियो
‘चिनियाँ बोस’लाई अन्तु घुमाउन मन छ